तपाईं सही हिउँ-सेतो मुस्कान बारेमा सपना? यो सम्भव भएको हो! दाँत Whitening एयर प्रवाह - एक हावा प्रवाह प्रविधि संग कोमल सफाई। यो यांत्रिक प्रविधि हुनत, यो धेरै बिस्तारै छ तामचीनी Polishes microparticles प्रयोग जम्मा हटाउँदछ सोडियम बिकारबोनिट को (वा glycine), हावा दबाव र पानी। दाँत whitening विधि एयर प्रवाह पीडारहित छ र असुविधाको ल्याउन छैन। मुख्य फाइदा - दाँत बीच क्षेत्रमा pigmentation हटाउन, यी ठाउँहरू अक्सर कुल उपचार समयमा वही मुसीबत किनभने। यो विधि सिद्ध छ लागि तामचीनी pigmentation हटाउन उदाहरण, धूम्रपान, कफी, चिया, रेड वाइन, आदि को लागि, कारण सबै, धेरै मान्छे पछि तिनीहरूले दाँत नियमित माझ पनि भने, त्यहाँ एक हिउँ-सेतो मुस्कान छ।
कसरी हुन्छ दाँत whitening एयर प्रवाह? यो मौखिक गुहा पूर्ण परीक्षा सुरु। पहिलो चरण एक पेस्ट प्रयोग गरी दाँत र गिजा हटाइयो पट्टिका छ। त्यसपछि तिनीहरूले धेरै राम्रो बालुवा र पानी, एक हावा प्रवाह द्वारा खुवाउनुभयो र दाँत बीच अंतराल मा भित्र पस्नु गर्न सक्नुहुन्छ जुन एक मिश्रण संग पलिश छन्। यस प्रणालीको शुद्धता dosing दिग्गज स्विस गुणवत्ता संग तुलना छ। प्लेग, tartar र दाग चाँडै र painlessly गायब। सामाग्री सटीक संग र एक आरामदायक तापमान मा वितरण। तपाईं सफाई संरचना एक फरक स्वाद र सुगन्ध चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
रासायनिक उपचार विपरीत, दांत दन्त हार्ड ऊतक एयर प्रवाह कम हानिकारक तिनीहरूले तामचीनी मा प्रोटिन यौगिकों असर छैन किनभने। यो प्रक्रिया भविष्यमा आफ्नो remineralization नेतृत्व गर्दैन। साथै, यो विधि बढ्दैन दाँत संवेदनशीलता , रासायनिक थर्मल र ट्याक्टायल stimuli गर्न।
यसलाई निम्न अवस्थामा एक विरंजन एयर प्रवाह प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ:
- प्रोस्थेटिक र निवारक दन्त चिकित्सा: यो सतह अशुद्धताओं हटाउँदछ र कंपोजिट, बरतन inlays, सुनिश्चित crowns र veneers, सही स्थापना हुनेछ कुशलतापूर्वक र स्थायी रूपमा।
- Orthodontics मा: एयर प्रवाह प्रक्रिया पछि टास्ने कोष्ठक र हटाउने adhering लागि दाँत सतह तयार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
- जब दाँत को फ्लोरिडेशन: आफ्नो राम्ररी सफाई को fluorination प्रक्रिया सुधार हुनेछ।
- बाल दन्त चिकित्सा मा: एक छाप अन्तर्गत क्षय को गठन को likelihood कम, anaerobic जीवाणुहरु को ठूलो हटाउन र यसरी आफ्नो जीवन विस्तार उपचार अघि एयर प्रवाह द्वारा दूध दाँत शुद्ध पार्नुभएर मद्दत गर्छ।
- सौंदर्य दन्त चिकित्सा: एयर प्रवाह दाँत whitening रासायनिक विरंजन को परिणाम सुधार गर्छ।
परिणाम हाम्रो आशा सफाइ गर्छ जब तर, अवसरमा छन्। यो कारण आफ्नो दाँत को Photocopier लागि सेतो-जस्तो कागज हुनेछ कि धेरै आशा गरिएका छ। तर यस्तो परिणाम, तपाईं, धेरै अस्वाभाविक हेर्न हुनेछ सहमत हुनेछन्। आफ्नो व्यक्तिगत रंग, पछि एयर प्रवाह whitening दाँत आयोजित गरिनेछ प्राप्त छ जो - यो कारण दाँत एक निश्चित रंग (शुद्ध छैन सेतो), र हामीलाई प्रत्येक छ भन्ने तथ्यलाई छ।
समीक्षा यसलाई एक, सुरक्षित सस्ती र प्रभावकारी कस्मेटिक प्रक्रिया वर्णन। रासायनिक whitewashing प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जसले एउटा कारण वा अर्को लागि, ती लागि पूर्ण।
Tsaritsyno मा दन्त चिकित्सा। दन्त क्लिनिक नम्बर 62: ठेगाना, शीर्षकमाथिको घण्टा
दाँत तामचीनी पुनर्स्थापना कस्तो छ?
क्लिनिक "Yunident": ग्राहक समीक्षा
के दाँत क्षय गराउँछ? खाद्य र दाँत क्षय कारण छ कि ब्याकटेरिया
व्यवसाय prosthodontist: चयन गर्न कि?
स्कूल कवितात्मक कौशल। विश्लेषण कविता Akhmatova
"जेल मा फुटबल।" कथा र फिल्म को अभिनेता "सबै वा केही"
विकिरण रोग: लक्षण र उपचार।
आतंक आक्रमण: कसरी आफ्नै लड्न? विधिहरू औषधि, लोक उपचार
सुरक्षा जाल संग Trampoline बच्चाहरु - बच्चाहरु को लागि सुरक्षित मजा
के फूल संग एक अझै पनि जीवन हुन सक्छ
को साराटोभ क्षेत्र को लाल बुक: बिरुवाहरु र जनावरहरूको प्रजाति को सूची